जथाभावी बाटो काट्दै हुनुहुन्छ ? २० मिनेट कक्षामा बस्‍नुपर्ला ! – Khabarhouse
जथाभावी बाटो काट्दै हुनुहुन्छ ? २० मिनेट कक्षामा बस्‍नुपर्ला !
Khabar house | २९ पुष २०७६, मंगलवार १४:४१ | Comments
काठमाडौं । पैदलयात्रा गर्दा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर जथाभावी बाटो काटिरहनु भएको छ? तोकिएको जेब्राक्रस वा आकासे पुल प्रयोग गर्नुभएको छैन ? त्यसो हो भने तपाईंलाई ट्राफिक प्रहरीले सडकमै सचेतना कक्षा दिनेछ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसपी जीवन श्रेष्ठले पैदलयात्रीले पनि मा’दक पदार्थ सेवन गर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले जस्तै ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना कक्षा लिनुपर्नेछ ।
महाशाखाका एसएपी भीमप्रसाद ढकालले पैदलयात्रीले बाटोमा हिँड्दा र बाटो काट्दा ट्राफिक नियम पालना नगरे त्यस्ता बटुवालाई समातेर २० मिनेटको कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको बताए । उनका अनुसार सचेतना कक्षामा सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमबारे सिकाइनेछ । एसपी श्रेष्ठले भने, ‘‘ट्राफिक नियम पालना नगरी जेब्राक्रस र आकाशे पुल प्रयोग नगर्ने पैदलयात्रीलाई ट्राफिक नियमबारे सचेतना कक्षा हाललाई भोटाहिटी र वीर अस्पताल अगाडि सञ्चालन गरेका छौँ ।
अन्य स्थानमा पनि अभियान सञ्चालन हुनेछ ।’’ ट्राफिक प्रहरीले समाते कक्षा नलिई पैदलयात्री जान पाउने छैनन् । सोमबार मात्रै १० हजार पैदलयात्रुलाई सचेतना कक्षा दिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार चालु वर्षमा मात्रै उपत्यकामा ७६ मध्ये ३२ जना पैदलयात्रीको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । गत वर्ष भने २५४ मध्ये ९३ जना पैदल यात्रीको सवारी दु’र्घटनामा ज्या’न गएको थियो ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसपी जीवन श्रेष्ठले पैदलयात्रीले पनि मा’दक पदार्थ सेवन गर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले जस्तै ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना कक्षा लिनुपर्नेछ । महाशाखाका एसएपी भीमप्रसाद ढकालले पैदलयात्रीले बाटोमा हिँड्दा र बाटो काट्दा ट्राफिक नियम पालना नगरे त्यस्ता बटुवालाई समातेर २० मिनेटको कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको बताए ।
अनुमति बिना तस्बिर, भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखे कारबाही !